Apple dia hamela ny mpamorona hamaly ny fanamarihana ny fampiharana azy ireo amin'ny iOS sy Mac | Vaovao IPhone
Misy andro izay zara raha misy vaovao mifandraika amin'ny Apple, fa miaraka amin'ireo kinova farany omaly sy ankehitriny miaraka amin'ireo betas dia somary sahirana isika nandritra ny roa andro. Ora vitsy lasa izay, Apple dia nandefa ny beta voalohany an'ny iOS 10.3, beta iray izay ahitana ny zava-baovao ao amin'ny vaovao Find my AirPods endri-javatra, fiasa izay hanampy antsika hahita mora foana ny headphones tsy misy tariby, tsy mila mampiasa ilay rindranasa tonga tao amin'ny App Store iray volana lasa izay ary nahemotra fotoana fohy taorian'izay. Mazava fa nisaina an'io asa io i Apple mba tsy hamela ny mpampiasa hiasa amin'izany.
Fa vaovao iray hafa izay azonay novakiana tao amin'ny naoty an'ity kinova ity dia hitanay any amin'ireo mpamorona izany, tadiavinao Afaka mamaly ny fanehoan-kevitra apetrak'ireo mpampiasa amin'ny fampiharana azy ireo izy ireo, zavatra izay tsy misy amin'izao fotoana izao amin'ireo sehatra an-tserasera Apple, ary raha ny fahitako azy dia namorona tsy fahampiana fiarovana ho an'ireo mpamorona tsy afaka miaro tena na manazava ny fanontaniana napetraky ny mpampiasa sasany. Io fiasa vaovao io dia iray amin'ireo fangatahana lehibe indrindra nataon'ny mpanamboatra hatramin'ny nahitana azy tamin'ny sehatra hafa, toa ny Google Play.
Amin'izao fotoana izao Apple dia tsy nanolotra antsipiriany bebe kokoa momba ny habetsaky ny fampiasa an'io asa vaovao io, izay ahafahan'ny mpamorona ny iOS sy macOS. mifanerasera amin'ny mpampiasa anao amin'ny fomba tsotra sy haingana kokoa. Tsy fantatray ihany koa raha toa ny valiny azon'ny mpandrindra atolotra ho hita eo akaikin'ny fanehoan-kevitra na ny mpampiasa sy ny mpamorona ihany no afaka miditra ao. Afaka manao tatitra amin'i Apple ny mpampiasa raha manomboka manararaotra an'ity safidy ity ny mpamorona iray, izay mety hiteraka fandroahana avy amin'ny programa developer Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Apple dia hamela ny mpamorona hamaly ny fanamarihana ny fampiharana azy ireo amin'ny iOS sy Mac
Mazava fa miloka amin'ny USB-C amin'ny iPad ny mpampiasa
Apple dia manome laharam-pahamehana ny fanatsarana Siri ho an'ny iPhone 8 vaovao